Tirada Dhimashada Kiisaska Coronavirus Ee Soomaaliya Oo Kororty 24 Saac La Soo Dhaafay - Awdinle Online
Tirada Dhimashada Kiisaska Coronavirus Ee Soomaaliya Oo Kororty 24 Saac La Soo Dhaafay
April 27, 2020 (Awdinle Online) –Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Goordhow shaacisay in 9 ruux oo qabay Cudurka Coronavirus ay xalay ku geeriyoodeen Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa waxaa tacsi loogu diray dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka baxeen 9-kii Bukaan ee xalay Cudurka ugu geeriyooday Isbitaalka.
Sidoo kale Qoraalka Wasaaradda Caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in Bukaanadan iyaga oo garaab ah laga keenay isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Qoraalka ayaa waxaa maamulada Isbitaalada Caasimadda looga digay in Bukaanada leh Astaamaha Saf-marka COVID-19 in aysan ku heyn Isbitaaladooda, isla markaana Maamulada looga baahan yahay inay soo gudbiyaan Bukaanada isla markii ay ku arkayaan Astaamaha Cudurka.
Si kastaba dadkan Cusub ee xalay u geeriyooday Cudurka Coronavirus ayaa waxaa sii kordhineysaa Tirada dadka Cudurka ugu dhintay Soomaaliya oo gaartay 32 Ruux.
Hoos ka Akhriso Qoraalka ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka.
Waxaan tacsi tiiraanyo leh u direynaa dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen kuwaasoo xalay ku geeriyooday isbitaal Martiini.
Bukaanadan ayaa iyaga oo garaab ah laga keenay isbitaalada gaarka loo leeyahay ee magaalada muqdisho.
Isbitaallada gaarka loo leeyahay waxaan ku wargelineynaa in bukaannada leh astaamaha cudurka safmarka COVID-19 ay xilli hore u soo gudbiyaan isbitaal Martiini oo ah goobta loo asteeyay in lagu daaweeyo dadka qaba cudurka COVID-19 iyada oo bukaanada loogu diyaariyay isbitaal Martini agabkii iyo dhaqaatiirtii daaweyn lahayad bukaanada qaba cudur ka COVID-19.
Previous articleXog: Shaqo joojin lugu sameeyay Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Dalka.
Next articleDigniin loo diray Isbitaalka gaarka loo leeyahay.